Modern Bathroom Mirrors - Eterna အလင်းရောင်
ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်လက်မှတ်, ထိုကဲ့သို့သော ul အဖြစ်, ETL နှင့် CE စသည်တို့
Eterna Lighting isahigh-tech smart mirror manufacturer established in 2010 နှင့် Foshan တွင်တည်ရှိသည်, တရုတ်ပြည်တောင်ဘက်. ကျနော်တို့သုတေသန၏လယ်ပြင်တွင်အထူးပြုနေကြသည်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲ & lighted mirror နှင့် mirror cabinets များထုတ်လုပ်ခြင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုနှင့်လူနေအိမ်ရာလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်.
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသောနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့ရှိသည်. သူတို့ကစံနှင့်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ချက်များနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ဖြစ်ရမည် 100% သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသေချာစေရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်, ယုံကြည်စိတ်ချရ, တင်ပို့ခြင်းမပြုမီလုံခြုံရေးနှင့်ကြာရှည်ခံမှု. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်မြောက်အမေရိကမှဖြစ်သည်, အရှေ့ဥရောပ, မြောက်အမေရိက, Oceania, အရှေ့အလယ်ပိုင်းစသည်တို့.
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်. 1 ဦး စားပေးသည်အမြဲတမ်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အာမခံမှုစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်.
ထို့အပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီက ISO မှီခဲ့သည် 9001 အရည်အသွေးမြင့်မားသောစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် National High-Tech Enterprise ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အများစုသည် UL ကိုလွန်သွားသည်, ETL, ဒီနည်းကို, RoHS, SAA စသည်တို့. အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်.
Eterna Lighting သည်တည်ထောင်ခဲ့သောအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် 2010 နှင့် Foshan တွင်တည်ရှိသည်, တရုတ်ပြည်တောင်ဘက်. ကျနော်တို့သုတေသန၏လယ်ပြင်တွင်အထူးပြုနေကြသည်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲ & lighted mirror နှင့် mirror cabinets များထုတ်လုပ်ခြင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုနှင့်လူနေအိမ်ရာလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်.
Our main products cover the whole system of smart mirrors, lighted mirrors and lighted mirrored cabinets, ထွန်းလင်းရေချိုးခန်းမှန်အပါအဝငျ & အလင်းရောင်မရှိသောရေချိုးခန်းမှန်; အလင်းရောင် & အလင်းရောင်မဟုတ်သောဆေးသေတ္တာ; LED Infinity မှန်; LED မှန်တက်ပါစေ; hollywood မှန် lighted;အလင်းရောင် & အလင်းရောင်မဟုတ်သောအပြည့်အ ၀ မှန်; အလင်းရောင် & အလင်းရောင်မဟုတ်သော TV မှန်; muti-function ကိုစမတ်မှန်; အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်စသည်တို့ကိုထိပါ. We participate in the exhibition held by different countries every year. We are sincerely looking forward to cooperate with friends from all over the world and achieveawin-win situation.
Eterna အလင်းရောင် is providing world-class custom Illuminated Bathroom Mirrors. We begin our journey of manufacturing mirrors from suchasmall manufacturing unit. Our hard work and quality assurance give usaplatform to become leading Illuminated Mirror manufacturers in China.
Eterna အလင်းရောင် is working hard to effectively satisfy the needs of our clients. We are offering our types of assistance inside the predefined time.